भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउदै गर्दा भारतीय नाकामा किन रोकियो एघार ट्रक चिया ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउदै गर्दा भारतीय नाकामा किन रोकियो एघार ट्रक चिया ?
झापा, २७ वैशाख । भारतीय अवरोधका कारण पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट एक सातादेखि तयारी चियाको निर्यात हुन सकेको छैन ।
चियाको गुणस्तर परीक्षणलाई झण्झटिलो बनाएर भारतले अवरोध गरेपछि चिया निर्यातमा अवरोध सिर्जना भएको हो । हाल भन्सार जाँचपास भएका ११ वटा ट्रक एक सातादेखि भारतीय भन्सार पानीट्यांकीमा रोकिएको चिया विस्तार योजना, फिक्कलका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार गुणस्तर नेपालबाट तयारी चिया कोलकातास्थित ‘सेन्ट्रल फुड ल्याबोरेटरी’ मा नमूना परीक्षण गराएपछि मात्र निर्यातको इजाजत दिने गरिएको छ । “झण्झटिलो प्रक्रियाले नेपाली चिया निर्यातमा समस्या सिर्जना भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले नेपाली किसान र व्यापारी दुवै मारमा परेका छन् ।”
पानीट्यांकी भन्सारमा रोकिएको ट्रकमा १७ हजार किलोभन्दा बढी तयारी चिया रहेको व्यवसायी रोशन अग्रवालले जानकारी दिनुभयो । “चिया बोकेको ट्रक वर्षाका बेला खुला ठाउँमा राख्दा चियाको गुणस्तर बिग्रिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्यात रोकिँदा ठूलो नोक्सान हुन सक्छ ।”
अहिले ट्रकैपिच्छेको नमूना कोलकाता पठाएर गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्था भारतले लागू गरेपछि चिया निर्यात रोकिएको अग्रवालले जानकारी दिनुभयो ।